ချက်ချင်းစတင်အသုံးပြုသင့်သော ထူးကဲသည့် ဗြိတိသျှဗန်းစကားများ - အပိုင်း (၉) - Myanmar Network
ချက်ချင်းစတင်အသုံးပြုသင့်သော ထူးကဲသည့် ဗြိတိသျှဗန်းစကားများ - အပိုင်း (၉)
Posted by Language Republic on December 2, 2015 at 11:26 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ငြီးငွေ့စရာကောင်းပြီး နည်းပညာဆန်သော စကားအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ အဆောက်အအုံတစ်ခု၏ အပြင်ဘက် (သို့) တွဲလျက်ရှိသော ကားထားရန်နေရာဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန်အသုံးဖြစ်သည့် "parking lot" နှင့် "parking garage" တို့နှင့် အဓိပ္ပာယ်တူပါသည်။
ဥပမာ - I left my car in the car park this morning. (ကျွန်တော့်ကားကို ဒီမနက် ယာဉ်ရပ်စခန်းမှာ ထားခဲ့ပါတယ်။)
Skive - နေမကောင်းချင်ယောင်ဆောင်ပြီး အလုပ်လုပ်ရန် (သို့) တာဝန်တစ်ခုခုကို ဆောင်ရွက်ရန် ရောက်မလာသော သူကို ရည်ညွှန်းရာ၌ အသုံးပြုသော ဗြိတိသျှဗန်းစကားဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းပြေးချင်သော ကျောင်းသားများ (သို့) ဆေးခွင့်တစ်ရက်လိုချင်သော ရုံးဝန်ထမ်းများနှင့် ဆက်နွှယ်၍ အသုံးများပါသည်။
ဥပမာ - He tried to skive off work but got caught by his manager. (သူရုံးပြေးဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ သူ့မန်နေဂျာက မိသွားတယ်။)
အသုံးများသော ဗြိတိသျှအသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့် အမှိုက်သရိုက်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရ သကဲ့သို့ တစ်စုံတစ်ရာအပေါ် မယုံကြည်ခြင်းကို ဖော်ပြရာ ၌လည်း သုံးပါ။ (ဤသဘောနှင့်သုံးသောအခါ bollocks ထက် ပိုမိုယဉ်ကျေးသော အဓိပ္ပါယ်တူသည်။
ဥပမာ - Can you take the rubbish out please?, and What? Don’t talk rubbish. (အမှိုက်တွေအပြင်ဘက် ထုတ်ပေးနိုင်မလား နှင့် ဘာ ပေါက်တတ်ကရတွေ မပြောနဲ့။)
Lifehack.org မှ CHRIS HAIGH ၏ 30 Awesome British Slang Terms You Should Start Using Immediately ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ထူးကဲသည့် ဗြိတိသျှဗန်းစကားများ - အပိုင်း (၁)
ထူးကဲသည့် ဗြိတိသျှဗန်းစကားများ - အပိုင်း (၂)
ထူးကဲသည့် ဗြိတိသျှဗန်းစကားများ - အပိုင်း (၃)
ထူးကဲသည့် ဗြိတိသျှဗန်းစကားများ - အပိုင်း (၄)
ထူးကဲသည့် ဗြိတိသျှဗန်းစကားများ - အပိုင်း (၅)
ထူးကဲသည့် ဗြိတိသျှဗန်းစကားများ - အပိုင်း (၆)
ထူးကဲသည့် ဗြိတိသျှဗန်းစကားများ - အပိုင်း (၇)
ထူးကဲသည့် ဗြိတိသျှဗန်းစကားများ - အပိုင်း (၈)
ထူးကဲသည့် ဗြိတိသျှဗန်းစကားများ - အပိုင်း (၉)
ထူးကဲသည့် ဗြိတိသျှဗန်းစကားများ - အပိုင်း (၁၀)